ဗီရာနဲ့ပွဲ အတွက် ခေါင်းထဲ မထားပဲ ဖိအားကင်းကင်း နဲ့ တိုကျိုမြို့လယ် မှာ လျှောက်လည်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း – Let Pan
ဗီရာနဲ့ပွဲ အတွက် ခေါင်းထဲ မထားပဲ ဖိအားကင်းကင်း နဲ့ တိုကျိုမြို့လယ် မှာ လျှောက်လည်နေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
နိုင်ငံတကာ သိုင်းနည်း ပေါင်းစုံသုံး လက်ဝှေ့ လောကမှာ မြန်မာ့ စပါးအုံး လို့ ကျော်ကြားတဲ့ မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန် ဟာ One Championship ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း နဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် တန်း မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ် ၂ ခု ရရှိထားတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမားပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ခုလက်ရှိမှာတော့ အောင်လအန်ဆန် ဟာ သူရရှိထားတဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအတွက် စိန်ခေါ်သူ ဟဲဗီးဝိတ်တန်းချန်ပီယံ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဘရန်ဒါဗီရာနဲ့ ထိုးသတ်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဒီပွဲအတွက် အပြင်း အထန်လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့ အေးအေးလူလူ ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ ဂျပန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ လည်ပတ်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်…..
ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲအတွက် ဖိအား မရှိဘူး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထိုးသတ်လို့ရတယ်လို့ ဆိုလိုနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ဖိအားတွေ နဲ့ ထိုးသတ်မယ်ဆိုရင် အမှားများနိုင်ပြီး စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဆို အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် အောင်လအန်ဆန်တစ်ယောက် ခုလို အေးအေးလူလူနေတာဟာ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအတွက်သာမက ပြိုင်ပွဲအတွက်ပါ အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ…
ဂျပန်မြို့လယ်ခေါင်က နာမည်ကျော် ရှီဘူရ လူကူးမျဉ်းကျားမှာ ကူးနေရင်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ဟန်ပန်ကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားသလို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်အတွင်းက အောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်တွေးရင် အံ့သြမိနေတုန်းပဲလို့ ဆိုထားသလို ဒါဟာ အစ ပဲရှိသေးတယ်လို့ ခုလိုပဲ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၂ ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်…
“@Onechampionship ရဲ့အစီအစဉ် နဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော် ရှီဘူရလူကူးမျဉ်းကြား ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်.လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်အတွင်း ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူတူဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ..တိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုအံဩမိနေတုန်းပါပဲ..ပြီးတော့ဒါဟာအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်….ခမ်းနားလှတဲ့ဒီအရာမှာအစိတ်အပိုင်းတခုအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာဟာကောင်းကြီးခံစားရတာပါပဲ…@ရှီဘူရလူကူမျဉ်းကြား,တိုကျိုAt the Shibuya Crossing, Tokyo. We are here! @onechampionship is blowing up . I’m still amazed at how much we’ve grown in the last three years and I know this is just the beginning. I’m blessed to beapart of this train . @ Shibuya Crossing, Tokyo” လို့ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ရရှိပြီး ၂ နှစ်ကျော် ကြာတဲ့အချိန်ကြမှ စိန်ခေါ်သူ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ကာကွယ်ပွဲအတွက် ထိုးသတ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီပွဲကို လာမည့် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန်ကို အားပေးဖို့ ပရိသတ်တွေကလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ကဲ …ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အောင်လအန်ဆန်အတွက် အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့လိုက်ပါအုံးနော်…
Source : Aung La Nsang(Burmese Python),CRD-HW (Shwe Yaung Lan)
လူတကာငေးကြည့် ရလောက်အောင် လှပလွန်းနေတဲ့ သန္တာဗို ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်များ
အနုပညာရှင် မောင်လေး ညီမလေးတွေ နဲ့ အတူ ပွဲတက်ရင်း ကလေးလေး တစ်ယောက်လို လွတ်လပ်ေ ပါ့ပါးစွာ ပျော်နေတဲ့ မအေးသောင်း
တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ဖူးမြော် ဖို့ ခဲယဉ်း လှသည့်...
ONE CHAMPIONSHIP ရဲ့ အကြမ်းဆုံး Fighte r နဲ့ UFC ပွဲ...
ရေကူးကန် အတွင်း ရေချိုး နေစဉ် သားမယား ပြုကျင့် ခံရ...
သမီးကို အနှစ်(၂၀)ကြာ အဓမ္မကျင့် ခဲ့တဲ့ ဖခင်၊ သမီးကေ...
ယခုလ ထီဖြန့်ဈေး စံချိန်တင် မြင့်နေသော ကြောင့် ထီဈေး...
ကျပ် သိန်းပေါင်း (၆၅၁၆၀) လာလှူ သွားပေမယ့် နားကပ်တောင်...
ချစ်ရတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော အစ်မအတွက် တန်ဖိုးကြီး LV အိတ်လေး မွေးနေ့ အကြိုလက်ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ Video လေး
တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ဖူးမြော် ဖို့ ခဲယဉ်း လှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ အံတော်
ထင် မထားလောက်အောင် သရုပ်ဆောင် ကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ အောင်ရဲထိုက်
ရှန်ဟိုင်း Fashion Week မှာ Runway Model အဖြစ်လျှောက်ပေးဖို့ ဖိတ်ကြား ခံခဲ့ ရတဲ့ အောန်ဆိုင်း
နော်လေး ကြောင့် နေပြည်တော်ကြီး ပို လှ မသွားစေချင်ဘူး ဆိုတဲ့ ” J Naw “
Copyright © 2018. Created by Let Pan.